भारत–अष्ट्रेलिया वान डे : सर्वाधिक रन चेजको कीर्तिमान,अष्ट्रेलिया श्रृङ्खला बराबरीमा ल्याउन सफल - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
भारत–अष्ट्रेलिया वान डे : सर्वाधिक रन चेजको कीर्तिमान,अष्ट्रेलिया श्रृङ्खला बराबरीमा ल्याउन सफल
प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०७५, सोमबार
काठमाडौं । भारतविरुद्धको चौथो एक दिवशीय खेलमा अष्ट्रेलिया विजयी भएको छ । भारतलाई चार विकेटले हराउँदै अष्ट्रेलियाले पाँच खेलको श्रृङ्खला २–२ को बराबरीमा ल्याउन सफल भएको छ । पहिलो दुई एक दिवशीयमा भारत विजयी भएको थियो भने तेस्रोमा अष्ट्रेलिया विजयी भएको थियो ।चन्डिगढमा भएको खेलमा भारतले दिएको ३५९ रनको लक्ष्य अष्ट्रेलियाले ४७.५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो ।
ओपनर एरोन फिन्च डकआउट भएको खेलमा पिटर ह्याण्ड्सकमले ११७ रनको शतकीय योगदान दिए । उश्मान ख्वाजाले पनि ९१ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेले भने एश्टन जेम्स टर्नरले ८४ रन जोडे । बलिङमा जस्प्रित बुम्राहल तीन विकेट लिए । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको भारतले ५० ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै ३५८ रन बनाएको थियो । धवनको सतकलाई छाँयामा पार्न पिटर हेन्डस्कम्वको जवाफि शतक र एस्टन टर्नरको विष्फोटक अर्धशत निर्णायक बन्यो। चौथो एकदिवसीय खेलमा चण्डीगढमा सर्वाधिक रन चेजको कीर्तिमान बन्यो।
भारतलाई ४ विकेटले हराएर सिरिजको निर्णय अन्तिम खेल सम्म धकेल्न अस्ट्रेलिया सफल भयो। अब यि दुई बिचको निर्णायक एकदिवसीय खेल १३ मार्चमा हुने छ। अष्ट्रेलियाको जितमा नायक बनेका पिटर हेन्ड्सकम्बले १ सय ५ बलमा ८ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै १ सय १७ रन बनाए। पिटरको यो ओडीआई करियरको पहिलो शतक पनि हो। पिटर र उस्मान ख्वाजाले तेस्रो विकेटका लागि १ सय ९२ रनको साझेदारी गर्दै अस्ट्रेलियाको जितको आधार तय गरेका थिए। ख्वाजाले ९९ बलमा ७ चौका प्रहार गर्दै ९१ रन बनाउन सफल भए।
त्यस्तै एस्टन टर्नरले विष्फोटक ब्याटिङ गर्दै ८४ रन बनाएपछि अस्ट्रेलियाको जित संभव भयो। टर्नरले ४३ बलमा ५ चौका र ६ छक्का प्रहार गर्दै ८४ रनको अविजित इनिङ खेले। एलेक्स केरीले २१ रन बनाए। ग्लेन म्याक्सवेलले १३ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै २३, शन मार्श ६ र आरोन फिन्च डक आउट भए। भारतका लागि जसप्रित बुमराहले ३, कुलदिप यादव, युजवेन्द्र चाहाल र भुवनेश्वर कुमारले समान एक विकेट लिए पनि टोलीको हार टार्न सकेनन्।
त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा ३ सय ५८ रन बनायो । ३८ ओभरको चौथो बलमा प्याट कमिन्सले बोल्ड आउट गर्नु अघि धवनले १ सय १५ बलमा १८ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै १ सय ४३ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेलेका थिए। धवनको यो वान डे करियरको १६ औं शतक हो। पछिल्ला १७ खेलमा खराब प्रर्दशन गर्दा आलोचनाको शिकार बनेका धवन फर्म देखिएका छन्।
त्यस्तै अर्का ओपनर रोहित शर्माले ९२ बलमा ७ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै ९५ रनको योगदान दिए । ओपनर धवन र रोहितले पहिलो विकेटका लागि १ सय ९३ रनको साझेदारी गर्दै भारतलाई विशाल योगफल तर्फ लम्काएका थिए। भारतका लागि कप्तान विराट कोहली ७, ऋषभ पन्त ३६, केदार जाधव १०, केएल राहुल र विजय शंकर समान २६ रनमा आउट भए । अष्ट्रेलियाका प्याट कमिन्सले १० ओभरमा ७० रन खर्चेर ५ विकेट लिएका थिए। त्यस्तै झेय रिचड्सन ३ र एडम जम्पाले १ विकेट हात पारे।
ग्रिजम्यान चम्किएपछि बार्सिलोनाको प्रभावशाली जित
एजेन्सी । स्पेनिस लिग अन्तगर्त आइतबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले प्रभावशाली जित निकालेको छ । एन्टोनी […]
एजेन्सी । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको बास्केटबल जर्सी एक लाख २० हजार डलर (करिब डेढ करोड रुपैयाँ) […]
एजेन्सी । आईसीसी टेष्ट च्याम्पियनसीप अन्तर्गत इंग्ल्याण्ड र अष्ट्रेलियाबीचको दोस्रो टेष्ट बराबरीमा सकिएको छ […]
खेलकुदको पैसामा मन्त्रीसम्मको लूट : करोडौं झ्वाम !
काठमाडौं । नेपाली खेलकुदको सर्वाेच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट पेस्की लिएर फर्छ्योट नगर्नेमा […]
काठमाडौ । क्यानाडामा जारी ग्लोबल टी-२० लिगमा विन्निपेग ह्वक्स इलिमिनेटरमा पुगेको छ । शुक्रबार बिहान सम्पन्न […]
थापाथली अस्पतालको अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट, दुई जना घाइते
झरी रोकिन अझै दुई दिन लाग्ने,देशैभरीका नदीमा बाढीको खतरा
नेपाली सेनाद्वारा शान्ति सैनिकको भत्ता वृद्धि,कति पुग्यो ?
काठमाडौंका लागि उडेका आठवटा हेलिकप्टर काठमाडौं छिर्न सकेनन्,चारवटा काभ्रेको खेतमा आकस्मिक अवतरण